Filibiin oo Dib Ugu Celisay Canada 69 Konteenar oo Qashin ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Filibiin oo Dib Ugu Celisay Canada 69 Konteenar oo Qashin ah
Filibiin oo Dib Ugu Celisay Canada 69 Konteenar oo Qashin ah
Markab Konteenarada qaada oo ay ku raran yihiin haraadiga qashinka warshadaha iyo Cusbitaalada ayaa ka shiraacday wadanka Philipiin ee koonfurta Aasiya, kaasi oo ku sii jeeda Magaaladda Vancouver ee Wadanka Canada . Qashinkan ayaa 5 sanno ka hor laga keenay Canada, kaasi oo muran ka dhex dhaliyay labada dowladood.
Xogyaha arrimaha dibada ee Philippine Teodoro Locsin ayaa qoraal uu so dhigay bartiisa twitterka, wuxuu macasalaameeyay Markabka isagoo yiri “Baaaaaaaaa bye’. Sidoo kale wuxu soo dhigay sawiro muujinaya markabka oo ka ambabaxay dekeda Subic Bay.
kooxaha u ololeeya degaanka Greenpeace and EcoWaste Coalition ayaa soo dhaweeyay Qashinka haraadiga ah ee dib loogu celiyay Canada, waxayna sheegeen in Philipine ahayn godad Qashinka lagu duugo
Madaxweynaha Philippine Rodrigo Duterte ayaa ku hanjabay in si xoog ah dib ugu celin doono qashinka haddii ayan Canada dib ula laaban. Qashinka oo ka koobnaa 103 Konteenar ayaa Philippine la geeyay sanadihii 2013kii ila 2014kii, kuwasoo markii hore lagu sheegay inay yihiin qashin dib loo warshadayn karo. konteerada qaarkood waxaa ku jira qashinka Korontada iyo Guryaha
Wasiirka Degaanka ee Canada Catherine McKenna ayaa khamiistii shalay wariyayaasha u sheegtay inay soo dhawaynayso in dib dalkeeda loogu celiyo Qashinkaas iyadoo sheegtay in Canada doonayso in si dhow ula shaqeeyaan dowladda Philipine.
Dhinaca kale, Maalmo ka hor, Dowladda Malaysiya ayaa ku dhawaaqday in dib ugu celinayso 450 Tone oo qashinka Balaastika dalalkii markii hore laga keenay oo ay ku jiraan Australia, Bangladesh, Canada, China, Japan, Saudi Arabia and Maraykanka.
Ra’isul Wasaaraha Malaysia Mahaatiir Maxamed oo shalay ka hadlay magaaladda Tokyo ayaa cambaareeyay sida wadamada qaniga ah ee warshadaha ku hormaray ay haraadigooda qashinka warshadaha ugu soo dhoofiyaan wadamada faqiirka ah ee Afrika iyo Aasiya.
Wadanka Shiinaha oo ahaa dalka ugu weyn ee aqbala Haraadiga qashinka Balaastika ee dib loo warshadeeyo ama la baabiiyo ayaa joojiyay in dalkiisa loo soo daabulo. Shiinuhu wuxuu sheegay inuu doonayo inuu ilaaliyo Degaankiisa. Go’aankaasi ayaa dhaliyay in dadka ka ganacsada daabulka qashinka ay raadiyaan dalal kale oo lagu aaso ama lagu warshadeeyo.